Labo xiddig oo muhiim u ah Barcelona oo kusoo laabtay tababarka kahor ciyaarta Champions League ee toddobaadkan – Gool FM
Haaruun September 27, 2021
(Barcelona) 27 Sebt 2021. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa si la yaab leh tababarkeeda waxaa maanta loogu arkay labo ka mid ah xiddigihii dhaawaca kaga maqnaa kuwaasoo muhiim u ahaa shaxda Macallin Ronald Koeman.
Jordi Alba iyo Pedri ayaa saakay ka qayb qaatay tababarka buuxa ee ay naadiga isugu diyaarineyso ciyaarta Champions League ee ay Arbaca la balansan tahay kooxda Benfica.
Labada laacib ayaa ka maqnaa kulankii ay Barca shalay 3-0 kaga adkaatay kooxda Levante ee ka tirsanaa horyaalka La Liga iyo sidoo kale kulammadii ka horreeyay ee Granada iyo Cadiz kaddib dhaawacyo kasoo gaaray kulankii ay guuldarrada kala kulmeen Bayern Munich ciyaartii ugu horreysay ee tartanka horyaallada Yurub xilli ciyaareedkan.
Sidoo kale, waxaa tababarka kusoo laabtay Frenkie de Jong oo ganaax ku seegay ciyaartii horyaalka ee toddobaadkan kaddib casaan la siiyay kulankii barbarraha goolal la’aanta ah ku dhammaaday ee Cadiz.
Si kastaba ha ahaatee, wali waxaa dhaawacyo kala duwan ku maqnaan doona saddexda weeraryahan ee kala ah Ousmane Dembele, Sergio Aguero iyo Martin Braithwaite kuwaasoo aanan la caddeyn xilliga ay garoommada kusoo laaban doonaan.
Erling Haaland oo magacaabay toddobo weeraryahan oo ka wanaagsan isaga... (Mbappe iyo Messi oo ka maqan & Werner oo ku jira)